Kubva pane repasirese-repanyika zvinhu zvakafemerwa mumweya-chinhu, iwo asinganzwisisike mapatya, uye kuburikidza nekuratidzira bonde rakawana humwe humwe humwe mukati maro. Kubudikidza nerudo uye chibairo izvozvi zvakagadzirisa chakavanzika chikuru: chakawana, saKristu, seMweya, pachako kuburikidza nezvose: kuti ini ndiri-Iwe-newe-Ndiwe-ini.
Vol. 2 NOVEMBER, 1906. Nha. 5
Copyright, 1906, neHW PERCIVAL.
MOYO sekumiririrwa nechiratidzo chezodiac aquarius iri mundege imwecheteyo chinhu (gemini), asi musiyano wedanho rekusimudzira wakasvika pakupedzisira unenge usingakwanisike. Ndiwo musiyano uripo pakati pekutanga kwekudyidzana kubva mukubatana, munyika isina kuratidzwa, uye nekuwanikwa kwekuziva kwakabatana kwekubatana mune mweya.
Chidimbu ndechekuti isina kuratidzwa primordial mudzi kubva kune icho mweya-chinhu, pakutanga kwenguva imwe neimwe yekushanduka, anofema (cancer) kuratidza uye anova anooneka uye asingaoneki epasirese nepasi nemafomu ese. Zvadaro zvese zvinopfuura uye zvinogadziriswa pakupedzisira (kuburikidza ne capricorn) mune iyo yekutanga midzi chinhu (gemini), kuti ifemurwe zvakare mukuratidzwa uye zvakare kugadziriswa. Saizvozvo zvakare pakutanga kwehupenyu hwepasirese hwepasi, icho chatinoti munhu chakafemerwa kubva kuzvinhu zvakasikwa zvemweya, anotora fomu inooneka uye kunze kwekunge asvika pakuziva kusafa muhupenyu ihwohwo, izvo zvaakaumbwa zvinogadziriswa kuburikidza nenyika dzakasiyana siyana izvo zvepakutanga zvepasi rake zvakafemerwa zvakare kusvikira asvika pakuziva kusafa, uye akabatana ova mumwe nemweya.
Kana chinhu chikafemerwa kunze semweya-chinhu chinopinda mugungwa rehupenyu, icho chisingaonekwe uye kuti chisawanikwe nemanzwiro enyama, asi chingaonekwe nezviito pane imwe ndege yayo, inova iyo ndege yemifungo, (leo --Sagittary). Zvemweya-sehupenyu sehupenyu hwagara kutsvaga chiratidzo. Inopinda muzvimiro zvisingaoneki zvehutachiona, uye ichikura, inodzikama, uye ichizvivaka uye mafomu asingaonekwe kuti aonekere. Inoenderera mberi kurongedza uye kuwedzera chimiro chinokura kuita bonde, kutaura kwakanyanya kwekuita kwekudyidzana munyika yakaratidzwa. Kuburikidza nechido chebonde chinokudziridzwa kusvika padanho repamusoro, uye nezviito zvemweya unosvinirwa pfungwa. Chido chinoramba chiri pachayo ndege iyo iri iyo ndege yemafomu uye zvishuvo (virgo-scorpio), asi kuburikidza nekufunga inogona kushandurwa, kushandurwa uye kuvandudzwa.
Mweya ishwa iro rinoshandiswa nenzira isina kusarudzika uye nekudyara. Kushandiswa kwaro kwaizoratidza kuti hwaive hunhu husingagumi kuve unokwanisa uye kupenda neshoko rakatangira kana raitevera; semuenzaniso, mweya wepasi rose, mweya wemhuka, mweya wemunhu, mweya werudzi, mweya wepanyika, mweya wemaminerari. Mweya uri mune zvese zvinhu sezvo zvinhu zvese zviri mumweya, asi zvinhu zvese hazvizive kuvapo kwemweya. Mweya uripo mune zvese nyaya kusvika kuzere iro chinhu rakagadzirira kufunga uye kuriona. Kana ikashandiswa zvine hungwaru, zvese zvinoshandiswa uye zvakasarudzika kushandiswa kwazvino izwi kwazvino zvinonzwisiswa nekujeka. Saka pakutaura nezve mweya wekutanga, tinoreva kuti neatomu, simba, kana chinhu chechisiko. Nomweya wemamineral, tinogadzira fomu, mamorekuru, kana magineti inobata kana kubatanidza maatomu kana zvinhu zvayakanyorerwa. Neyemuriwo mweya, unorehwa hupenyu, hutachiona, kana sero rinogadzirisa mauto kuita fomu uye rinokonzeresa fomu kukura uye kukura kuve kurongeka kurongeka. Isu tinodaidza mweya yemhuka, chishuwo kana simba kana latent moto, yakaitwa inoshanda nekubatana nemweya, unotenderedza, unogara mukati, unotonga, unoshandisa, uye unobereka mafomu ayo. Mweya wemunhu ndiro zita rechikamu icho kana chikamu chepfungwa kana wega kana kuziva wega-ini-ini nheyo inoisa mukati memunhu uye inotambudzika nechishuvo nemafomu ayo ekutonga uye kubata. Universal mweya mweya ndiye akangwara vese vanoziva chifukidziro, chipfeko, uye mota yekuvapo kweimwe isingagoneki Kuziva.
Mweya hausi chinhu asi mweya ndiwo magumo uye yepamusoro soro chinhu, iwo maviri anopesana mundege imwechete; mweya hausi kufema asi mweya uchiita kuburikidza nekufema mukumuka kwehupenyu hwese; mweya hausi hupenyu uye kunyangwe iwo wakapesana nehupenyu (leo — aquarius) asi mweya ndiwo musimboti wokubatana mune zvese kuratidzwa kwehupenyu; mweya hauna fomu asi mweya unobatanidza mafomu ese kune mumwe mauri mavanogara uye vanofamba uye vane zvavari. Mweya haisi yekuita bonde kunyangwe mweya unoshandisa iyo sexes sechiratidzo chayo, huviri, uye nekuvapo kwayo seyamwari uye androgyne mune mumwe nemumwe munhu izvo zvinoita kuti pfungwa dzienzanise uye kuenzanisa mweya-chinhu kuburikidza nebonde uye kuzvigadzirisa kuva mweya. Mweya hausi chishuwo asi mweya rudo rwekuzvidzikisira rwacho rwekuti chishuwo chisinga zorodze, chisina kugadzikana, chinosekesa, chisina kudzidza. Omweya haifungirwe asi mweya uchizviratidza wega mukufunga kuti kuburikidza nekufunga zvese hupenyu nemafomu epasi angasimudzirwe kumusoro. Mweya hausiyani asi mweya ndiyo huchenjeri mune humwe humwe hunogonesa kuvepa humwe hunhu uye kuwedzera humwe hunhu hwayo uye kuzvizivisa nehumwe humwe humwe humwe hunhu uye nekudaro kuwana iko kuratidza kwakakwana kwerudo kunotsvakwa nemunhu mumwe nemumwe.
Mweya inhungamiro inoziva ino pindirana, inobatanidza, uye inorondedzera maatomu ese ari muchadenga nemamwe maatomu ese uye pamwe chete. Sezvo ichibatanidza uye ichienderana maatomu uye ichienderana nematanho anoenderera mberi madhiinari, miriwo, mhuka, uye humambo humambo, saka zvakare inorondedzera inoonekwa nehusingaonekwe humambo, nyika pamwe nenyika, uye imwe neimwe nezvose.
Semweya wemunhu mweya munhuwo munhu mumunhu, kuziva kwacho kunoita kuti nyika yese ive hama uye munhu aneudyire ndi Kristu. Mweya ndiyo nheyo inoziva inounza nyaradzo kune vano shungurudza, zorora kune vakaneta, simba kune vanonetseka moyo, hungwaru kune vanoziva, nerunyararo runyararo kune vakachenjera. Mweya ndiyo yose nheyo inoziva, chifukidziro chemwari cheC Consciousness. Mweya unoziva zvinhu zvese asi chete munhu anozviziva anogona kuve anozviziva uye mukati uye semweya. Mweya ndiye musimboti werudo rwepasi rose umo zvinhu zvese zvinotsigirwa.
Mweya hauna chimiro. Izvo zvakafanana Kristu naKristu havana chimiro. “Kristu” mweya unoshanda kuburikidza nehunyanzvi hwemukati.
Kusaziva nezve kuvapo kwemweya, vasingazivi uye neudyire uye nehutsinye vanovavarira kurwisa kunyange senge mucheche ari kurwisa nekuedza kwaamai vake kuti vasunungure. Asi mweya unoita zvinyoro nyoro kune vese vanopokana nazvo samai vane hukasha hwehasha dzemucheche wavo.
Kana vanyaradzi vachinyora nezverudo rwunoita kuti murume kana mukadzi azvipire iye nekuda kweanodiwa, vese vechidiki nemhandara vanonakidzwa nekuverenga. Vanhu vakuru vanofunga nezvesimba uye hunhu hwehunhu hwegamba. Vose vakuru nevadiki vachafunga nezvazvo uye vazvibatanidze pamwe nehunhu. Asi kana sages akanyora nezverudo rwakaita kuti Kristu kana chero mumwe "muponesi wenyika" azvipire iye nekuda kwemudiwa wake-vanhu- pwere nemhandara vanozununguka nepfungwa vozviona sechinhu chinofanira kugadziriswa kana vachembera. , kana neavo vakaneta nepo kana neupenyu, kana rufu rwava pedyo. Ivo vanhu vekare vanoremekedza uye vanofungisisa muponesi nekutya kwechinamato, asi hapana vadiki kana vakuru vanozozvibatanidza neicho chiitiko kana iye akazviita, kunze kwekunge kuri kwekutenda nekuwana pundutso nebasa re “muponesi.” Uye zvakadaro rudo kana kuzvipira kwekuda mudiwa kana mudiwa waamai nekuda kwemwana wake, ndiyo musimboti mumwe, kunyangwe uchiwedzerwa, izvo zvinomanikidza Kristu kusiya hunhu uye kuwedzera humwe humwe kubva kumiganhu yakatetepa yevanogumira hunhu mune zvese uye kuburikidza nevanhu vese. Urwu rudo kana chibayiro hachisi mukati mezvinoonekwa nemurume kana mukadziwo zvake, uye saka vanozviona sevanhu vakawandisa uye kupfuura ivo, uye kwete verudzi rwavo. Rudzi rwavo rudo rwemurume nemukadzi uye mubereki nemwana uye kuzvipira kweumwe neumwe. Kuzvipira mweya mweya werudo, uye rudo runofarira chibayiro nekuti kuburikidza nekubayira rudo runowana runonyanya kutaura uye mufaro. Pfungwa yacho yakafanana mune yega yega, mutsauko ndewekuti mudiwa naamai vacho vanoita zvisina kufanira nepo Kristu achiita nehungwaru, uye rudo rwacho rwakanyanya uye rwusina kusimba zvakanyanya.
Nechinangwa chekuvaka munhu wega, I-am-I-ness, kusimudza kwenyaya kune imwe nyika kune iyo inoziva yega uye kuzivikanwa kwayo seyakasarudzika, nekuda kweizvozvo chinangwa chekuzvida chinokudziridzwa. Kana humwe humwe hunhu hwasvika, saka manzwiro eudyire akashandisa chinangwa chayo uye anofanira kusiiwa. Zvemweya-zvinhu hazvichisiri zvemweya- nyaya. Yakabatanidzwa mune chimwe chinhu, iko zvino kuziva sezvo ini ndiri-Iwe-uye-Iwe-ndiwe. Ikoko mhondi uye yakaurayiwa, hure uye vekitori, benzi uye vakangwara ndeimwe. Icho chinovaita mumwe ndiKristu, Mweya.
Kugadziriswa kwekudyara rudo. Tinokunda udyire nerudo. Urwo rudo rudiki, rudo rwemunhu, mune imwe diki nyika, ndiye mubatiri werudo rwuri Kristu, Mweya.
Mweya inotanga kuzivisa huvepo hwayo mumunhu sehana, iyo inzwi rimwe chete. Izwi rimwechete mukati memanzwi mazhinji ezvepasi rake anomusvitsa kuzviita zvekusazvida uye zvinomutsa mukati mwake kuyanana nemurume. Kana izwi rimwechete rikateverwa kana ranzwikwa rinotaura kuburikidza neese chiitiko chehupenyu; mweya inozozvizviratidza kwaari kuburikidza nezwi revanhu mukati make somweya wevanhu, hukama hwese. Anobva ave hama, obva aziva kuti ini ndiri-iwe-newe-Ndiwe-ini kuziva, ndikave "muponesi wenyika," uye ave mumwe nemweya.
Iko kwekuziva mweya kunofanirwa kuitirwa apo humwe humukati hwakagadzikwa mumuviri wemunhu uye kurarama mune ino nyika yemuviri. Hazvigone kuitwa kana kuberekwa kana mushure mekufa kana kunze kwemuviri wenyama. Inofanirwa kuitwa mukati memuviri. Mumwe anofanirwa kuziva mweya mukati memuviri wake wemuviri mweya usati wagona kuzikanwa zvizere kunze kwemuviri wemuviri. Izvi zvairehwa mumharidzo padambudziko re "Bonde," (libra). (Ona The Word, vhoriyamu 2, Kwete. 1, p. 4.)
Izvo zvinotaurwa nevose vanorarama vadzidzisi, uye mune mamwe magwaro, kuti uyo mweya unoda, unosarudza kuzvizarura. Izvi zvinoreva kuti mukati meavo chete vanokodzera nehutano hwepanyama, hwepfungwa, hwepamoyo uye hwepamweya, uye panguva yakafanira, mweya uchave unozivikanwa sekuratidzwa, kujeka, kuberekwa patsva, rubhabhatidzo, kana kuvhenekerwa. Iye murume anobva ararama mukati uye anoziva hupenyu hutsva nebasa rake chairo, uye ane zita idzva. Ndizvowo zvakaitika apo Jesu paakabhabhatidzirwa - ndiko kuti, apo mweya wenyama wakazara mumuviri - akava uye akanzi Kristu; akabva atanga hushumiri hwake. Saizvozvo zvakare zvaive kuti Gautama achifungisisa pasi peBo muti - muti unoyera mumuviri wenyama - akawana kuvhenekerwa. Kureva kuti, mweya wakazviratidza mukati make, uye akadaidzwa kutiBuddha, akavhenekerwa, uye akatanga hushumiro hwake pakati pevanhu.
Pane imwe nguva muhupenyu hwomunhu imomo inokwira kubva mukati mekukura kwekuziva, kubva kuzviitiko zvidiki zvehupenyu hwehumdrum hwepasi rose mukushanda-zuva renyika kune nyika yemukati inopinda, inotenderera, inotsigira, uye inodarika nepasipo ino nyika diki yepasi pedu. Mukufema, mumhepo, mune imwe nguva, nguva inoguma uye nyika ino yemukati inovhurika kubva mukati. Yakawedzera kupenya kupfuura zvuru zvezvuru zuva rinozvivhura mumurazvo wemwenje usinga gone kana kupisa. Nyika ine makungwa ayo asingazorodze, makondinendi anomhanya, kutengeserana kuri kumhanyisa, uye chamupupuri chine ruvara chakawanda chebudiriro; renje raro roga, magadenga akasimuka, makomo akabururuka nechando; itsvo, shiri, mhuka dzesango nevanhu; dzimba dzayo dzesainzi, mafaro, kunamata; mafomu ese kuzuva nepasi uye kumwedzi nenyeredzi zvinoshandurwa uye kuve nekukudzwa uye nehumwari nekunaka kukuru uye hakuna mumvuri wechiedza uyo unopenya kubva zvese kubva mukati medenga remweya. Ipapo vana vadiki vehasha, ruvengo, godo, zvisina zvazvinobatsira, mapundu, kukara, kuchiva kwenyika ino nyangarika murudo nemasimba uye nehungwaru zvinotonga munzvimbo yemweya, mukati nokunze kwenguva. Iye munhu anga achiziva anotsvedza kubva pausiku kusvika panguva. Asi waona mwenje, wanzwa simba, wanzwa izwi. Uye kunyange asati asunungurwa, haaseki uye anogomera uye anonamatira padanda resimbi yenguva kunyange angave achitakurwa narwo. Kubva zvino anorarama kuti ashandise minzwa nemabwe enzvimbo dzenyika uve mafuro manyoro neminda yakaorera; kuburitsa kubva murima iro squinging, zvinokambaira, zvinokambaira, uye kuzvirovedza kumira mukati uye kutsungirira mwenje; kubatsira mbeveve inotarisa pasi uye kufamba nemaoko nemakumbo pasi kuti imire yakatwasuka uye isvike kumusoro kwechiedza; anorarama kuimba rwiyo rwehupenyu munyika; kurerutsa mitoro; kupisa pamoyo yeavo vanoshuvira, iwo moto wechipiriso chinova rudo rwemweya; kupa kune avo maseva-vanoimba rwiyo rwenguva pane yakapinza uye yakabatarara yemarwadzo uye mafaro, uye vanoshandura vakazvisunga pamuchina wesimbi wenguva, rwiyo rutsva rwemweya: rudo rwekuzvipira . Nekudaro anorarama kubatsira vamwe; uye saka achiri kurarama, achiita, uye aine rudo mukunyarara, anokunda hupenyu nekufunga, fomu nezivo, zvepabonde nenjere, chishuwo nechido, uye, achiwana huchenjeri, anozvipa iye muchibayiro cherudo uye anopfuura kubva kuhupenyu hwake muhupenyu hwevanhu vese.
Mushure mekutanga kuwona iwo mwenje uye kunzwa simba uye kunzwa izwi, mumwe haazombofi achipfuura munzvimbo yemweya. Achararama hupenyu hwakawanda pasi pano, uye muhupenyu hwoga hwoga achafamba chinyararire uye asingazivikanwe munzira yemafomu kusvikira iko kusazvibata kwake kuchaita kuti nzvimbo yemweya zvakare kuvhurike kunze kubva mukati kana achizogashira zvakare rudo rusina iye, , uye njere dzakanyarara. Ipapo anozotevera vasina kufa avo vakambofamba munzira isingaurayi yeConccious.